MURUGO: Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Ugu Caansan Musaaricada Oo Geeriyooday – Latest Sports News
MURUGO: Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Ugu Caansan Musaaricada Oo Geeriyooday
Xiddig taariikh weyn ku lahaa ciyaarta legdinta ee Musaaricada ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday waddanka Maraykanka.
Warbaahinta dalka Maraykanka ayaa shaacisay in halyeygii musaaricada ee King Kong Bundy oo sidoo kale loo yaqaanay Christopher Alan Pallies uu geeriyooday iyadoo ay da’diisu tahay 61 jir.
Warku ma sheegin sababta keentay dhimashada King Kong Bundy, hase yeeshee David Herro ayaa bartiisa Twitterka kusoo qoray in loo xaqiijiyey geerida halyeygan, sidaas oo kalena waxa bartiisa geeridan ku shaaciiyey Shane Helms oo ka mid ah soo-saareyaasha ciyaaraha Musaaricada.
Bundy oo lagu xasuusto wacdarihii uu ka dhigi jiray garoomada sannadihii 19980-meeyadii, ayaa markii geeridiisu soo yeedhayba waxa dib loo baadhay taariikhdii uu ka tegay iyo xasuusihii quluubta taageereyaasha ugu jiray.
Markiiba waxa bannaanka la keenay kulankii uu sannadkii 1986-kii ku waajahay Hulk Hogan oo xayndaabka layskugu xidhay, taas oo ahayd kulankii ugu horreeyey ee ciyaarta weyn ee loo yaqaano WrestleMania ee kali-kali loo qabto.
Sannadkii 2008, waxa uu Bundy galay rikoodhka kulankii ugu gaabnaa ee taariikhda musaaricada, kaddib markii uu sagaal ilbidhiqsi oo kaliya ku khaarajiyey SD Jones, waxaana illaa hadda uu yahay ciyaartoygii muddada ugu gaaban ku guuleystay WrestleMania.
Bundy ayaa lagu yaqaanay inuu awood xad-dhaaf ah lahaa, isla markaana uu ciyaartooyada si degdeg ah u burburin jiray, isagoo ku qasbaya inay isdhiibaan ka hor inta aanu garsooruhu tirinin tirada dhirbaaxada saddexda ah ee guusha lagu iclaamiyo.
Bundy ayaa waxay isku koox noqdeen Lord Littlebrook iyo Little Tokyo kooxda isku-dhaka ee Tag team, waxaanay WrestleMania III la ciyaareen saddexda dagaallame ee Hillbill Jim, The Haiti Kid iyo Little Beaver, hase yeeshee Bundy looma ogolaanin inuu ciyaartaas safto kaddib markii uu jabiyey xeerarka musaaricada iyadoo uu weerar ku qaaday Beaver ka hor bilowgii ciyaarta.
Bishii February ee sannadkii 1988-kii ayuu ka baxay ciyaaraha musaaricada, waxaanu dib ugu soo laabtay sannadkii 1994-kii, waxaana ciyaartii WrestleMania 11 uu la ciyaaray Undertaker, waxaanu kala hoyday guul-darro.
Si kastaba ha ahaatee, Bundy ayaa ka mid ahaa halyeeyada guulaha badan kasoo hooyey WWE, isla markaana ku jira diiwaanka kulankii ugu gaabnaa oo uu sagaal ilbidhiqsi ku qasbay gudahood ku qasbay SD Jones inuu isdhiibo.